Liiska awoodaha iyo kaalimaha baasaboorada adduunka oo la soo saaray… – Hagaag.com
Liiska awoodaha iyo kaalimaha baasaboorada adduunka oo la soo saaray…
Posted on 15 Seteembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Mowqaca “Passport Index” ayaa soo saaray liiskii ugu dambeeyey ee kaalimaha baasaboorada adduunka ee ugu awooda badan oo lagu safro.
Kaalinta koowaad waxaa iska xaadirisay dalka Singapore oo loo aqoonsaday baasboorka ugu awooda badan ee dunida, waxaa lagu tegi karaa 166 dal oo 127 dal viso la’aan la geli karo halka 39 dal ay visaha marka ay yimaadaan qaataan. halka 32 dal oo keliya ay ka rabaan viso, sida lagu faafiyey “Passport Index” ee sanadka 2018.
Kaalinta labaad waxaa soo cariirsaday dalalka Jarmalka, Denmark, Sweden, Finland, Luxembourg, Norway, Holland, South Korea iyo Maraykanka. Baasabooradooda waxaa lagu geli karaa 165 dal oo aan lahayn fiiso, ama fiisada la siiyo marka ay yimaadaan.
Kaalinta seddaxaad waxaa soo galay dalalka Talyaaniga, Faransiiska, Spain, Greece, Portugal, Japan, Ireland iyo Canada, dadka haysta baasabooradan waxay gali karaan 164 dal oo aan lahayn fiisada ama fiisada la siiyo marka ay yimaadaan.
Qeybta hoose ee liiska, waxaa ku jira Afghanistan ​​oo baasaboorkeeda lagu geli karo 30 dal oo keliya, oo ay ku jiraan 25 dal oo fiisaha la siiyo marka ay yimaadaan, halka ay u baahan yihiin in ay viso ku galaan 168 dal. Sidoo kale kaalinta ka koreysa Afghanistan ayaa ah dalka Ciraaq oo loo oggol yahay baasaboorkooda in lagu galo 33 dal oo viso la’aan iyo in ay ka qaataan visaha marka ay yimaadaan.